वाहियात कुरा, मलाई कसले हटाउने ?
संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रदेश-२ को मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका हुन्, लालबाबु राउत । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण क्रममा उनले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा पर्‍यो । केन्द्रमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका कारण उनको पद नै संकटमा परेको छ, अहिले ।
केन्द्र सरकारसँग खटपटका कारण उनको अमेरिका भ्रमण अस्वीकृत भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा पाइन्छ । पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रदेशको आर्थिक विकास र केन्द्र सरकारसँग उनको सम्बन्धलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समयका प्रदेश-२ संयोजक धैर्यकान्त दत्तले गरेको कुराकानी:
नेपालले पहिलो पटक प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्दैछ । यसलाई संस्थागत गर्न के के काम गरिरहनुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिले त प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुने क्रममा छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याएका छौं ।
प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐनलगायत कानुन निकट भविष्यमै आउँदैछन् । प्रदेश सरकार आफैं राज्य सञ्चालन गर्न त्यस किसिमको आधार खडा गर्दैछ ।
प्रदेश-२ लाई आर्थिक रूपले कमजोर मानिन्छ । यस प्रदेशको गरिबी हटाउन के के काम अगाडि बढाउनुभएको छ ?
प्रदेश सरकार गरिब छैन । त्यसका विभिन्न कारण छन् । तर, यो प्रदेश गरिब बनेको छ । समृद्ध बनाउने मिसन बोकेर प्रदेश सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागेको छ ।
प्रदेशका बासिन्दा गरिब हुनुको कारण यहाँ उद्योगधन्दा जसरी स्थापित हुनु पथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । युवा खाडी मुलुकमा मिहिनेत गरेर जीविकोपार्जनमा लाग्न बाध्य छन् । उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध भएको भए नेपालको आफ्नै उत्पादन र विदेश निर्यात बढ्थ्यो ।
उद्योगधन्दालाई कसरी अगाडि बढाउने र लगानीकर्तालाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने विषय एकातिर छ । अर्कातिर, नेपाल कृषिप्रधान देश हो । प्रदेश-२ मा झनै बढी किसान छन् । कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्नतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी देखिएको छ ।
धेरैजसो खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । आकाशे खेतीको भर पर्नुपरेको छ । उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दा युवा र किसान त्यसलाई निर्यात गर्ने पाटोमा लाग्ने थिए ।
खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ तथा बीउविजन उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । विदेश पलायन भएका युवा र किसानलाई फर्काउने र यतै रोक्ने उपाय पनि हो यो ।
पर्यटन व्यवसाय पनि अर्को ठूलो अवसरका रूपमा छ । यहाँका धार्मिक स्थलहरू त्यसका आधार हुन् ।
राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइसकेको छ । अब प्रदेश-२ को आर्थिक क्रान्तिका लागि कस्ता एजेन्डा र कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ ?
राजनीतिक क्रान्ति कहाँ सम्पन्न भएको छ ? यो मुलुकमा सबैले समान अधिकार पाउन सकेका छन् ? के सबैले संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छन् ?
अहिले पनि मधेशी, मुस्लिम, थारू र पहाडका दलित, जनजातिहरू अहिलेको नीतिसँग सन्तुष्ट छन् र ?
त्यसैले मलाई लाग्छ, राजनीतिक क्रान्ति नै सम्पन्न भइसकेको छैन । तथापि, प्रदेश सरकारको मूल एजेन्डा विकास र समृद्धि हो । प्रदेशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।
पाँच वर्षपछिको प्रदेश-२ कस्तो होला ? के मार्गचित्र छ, प्रदेश सरकारसँग ?
विकासका हर सम्भावना बोकेको छ, प्रदेश-२ ले । समृद्धिको हरेक सम्भावना बोकेको छ । यसलाई एउटा सुशासित प्रदेश बनाएर मुलुककै एक नम्बर प्रदेश बनाउने मेरो मिसन छ । त्यही मिसनमा म अगाडि बढेको छु ।
प्रदेश-२ लाई पहाडबाट ‘डिस्कनेक्ट’ गरिएको छ । जोड्नका लागि राजनीतिक र आर्थिक योजना के छन् ?
‘डिस्कनेक्ट’ त गरेको छैन । यो प्रदेश मुलुकको अभिन्न अंग हो । हामी त भन्छौं, यो मुलुकलाई समृद्ध, विकसित र सबैको बनाउनुछ भने हिमाल, पहाड र तराई सबैलाई एक ठाउँमा जोडेर साथै लग्नुपर्ने खाँचो छ ।
भौगोलिक रूपले त छुट्टिएकै देखिएको छ नि ?
सीमाको हिसाबले तराई मानिदिनुभयो भने छुट्टिएको देखिएला । तर, हामी सबै एउटै मुलुकका हौं । यो मुलुकको अखण्डता, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र सम्भावनालाई केलाउनुपर्छ ।
नेपालको सम्भावना भनेकै मधेश, पहाड र हिमाल हो । यी तीनै भूभाग एकअर्काका अभिन्न अंग हुन् । हामीलाई यो प्रदेशलाई विकसित बनाउनुछ भने पहाड र हिमाल दुवैको सहयोग चाहिन्छ ।
पहाड र हिमालका हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । त्यसैले, मलाई लाग्दैन, हामी अलग छौं भन्ने । हामी एकै हौँ । यो मुलुकभित्र रहेर प्रतिव्यक्ति आयदेखि मुलुकको समृद्धि कसरी हुन सक्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्नेछ ।
प्रदेश-२ गरिब रहँदा मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । यो प्रदेशमा बेरोजगारी बढे रोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछ र लगानीको वातावरण कसरी तय पार्दैछ ?
सबैभन्दा पहिले लगानीकर्तालाई उचित वातावरण दिनुपर्छ । आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गरिदिनुपर्छ । बन्द हडताल, जसका लागि हामी बदनाम छौं, लाई हटाउनुपर्छ । लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । प्रदेश सरकार त्यसैमा लागेको छ ।
सुगम भएर पनि प्रदेश-२ का भारतसँग जोडिएका सबै नाका व्यापारका लागि उपयुक्त छैनन् । तिनको स्तरोन्नतीका के योजना छन् ?
प्रदेशलाई कसरी समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिन्छ, त्यसका लागि हालसम्म रहेका नाकासम्बन्धि समस्या समाधान गरेर हामी अगाडि बढ्छौं ।
बजेटका लागि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ कि यहीं सम्भावनाहरू पहिल्याउनु भएको छ ?
प्रदेश सरकार अहिले 'सस्टेन' हुन पाएको छैन । यहाँबाट गइरहेको राजश्वबाट विभिन्न शीर्षकमा बजेट आउने गरेको छ । हाम्रो आधार खडा नभएसम्म केन्द्र सरकारमै निर्भर भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।
तर, केन्द्र सरकारसँग तपाईंको खटपट शुरु भएको भनिन्छ नि ?
केही खटपट छैन । राम्रो सम्बन्ध छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन गर्दै गर्दा तपाईंले दिनुभएको अभिव्यक्ति विवादित बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंले त्यसप्रति असन्तुष्टी जनाउनुभयो । अन्य मुलुकका सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा मुलुकभित्रको असन्तुष्टी व्यक्त गर्नु आवश्यक थियो र ?
प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ भने मलाई थाहा छैन । तर, मसँग त उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छैन । असन्तुष्ट छु भनेर मलाई त अहिलेसम्म भन्नु भएको छैन ।
यस्तो कहीं कुनै कुरा छैन । तपाईंहरूलाई बढी थाहा हुन सक्छ । मलाई त्यस सम्बन्धमा थाहा छैन । र, केपी ओलीजी मसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्न, त्यति मलाई थाहा छ ।
अनि त्यो अभिव्यक्ति दिनु आवश्यक थियो र ?
अरे, मुलुकको मैले राख्दै आएको समस्या हो । मैले कुन नयाँ कुरा भनेको छु र ? त्यही पुरानो कुराको निरन्तरता हो । त्यसमा केही नयाँ कुरा छैन ।
मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले तपाईंको भाषण तयार पारिदिएको आरोप छ नि ? कसैको दबाबमा यस्तो कुरा बोल्नुभएको हो ?
कसले तयार गर्छ । म आफैं नेता हो नि । म आफैं पार्टीको उपाध्यक्ष छु । भाषण कसले र किन तयार गर्नुपर्‍यो र ?
किन कसैको दबाब ? म आफैं नेता छु, पार्टीको कुरा छोड्नूस् । म दुई नम्बर प्रदेशको नेता हो । म प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो नि । प्रदेशका जनताको चाहनालाई मैले राखेको हुँ ।
जानकी मन्दिरमा दुई प्रधानमन्त्रीहरूको मन्तव्यका क्रममा राखिएको राष्ट्रिय झण्डाको आकारबारे पनि विवाद भयो । र, प्रदेश सरकारमाथि नै त्यसबारे प्रश्न उठाइयो । वास्तविकता के थियो ?
झण्डा हामीले होइन, केन्द्र सरकारले राखेको हो । केन्द्र सरकारको 'प्रोटोकल अफिसर'ले राख्ने कुरा हो । अरू कसैले राख्न पनि सक्दैन ।
प्रदेश सरकारको त्यहाँ सरोकार पनि थिएन । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको अन्तिममा उपस्थिति मात्र थियो । त्यहाँको सम्पूर्ण व्यवस्थापन संघीय सरकारले गरेको हो । र, हामीलाई थाहा पनि छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुभएन र भारतीय सुरक्षा फौजको निर्देशनमा काम गर्नुभएको आरोप छ ? के हो वास्तविकता ?
यो त केन्द्र सरकारलाई मैले सोध्नुपर्ने कुरा हो । मुलुकको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति संघीय सरकारले तय गर्छ । मैले तय गर्ने होइन । यहाँ जति पनि सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो, त्यो संघीय सरकारको रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएकाहरूले गरेका थिए । हाम्रो सरोकार त मोदीजीको नागरिक अभिनन्दनका लागि जनता जुटाउने र मञ्च खडा गर्नसम्म मात्र थियो ।
खटपटकै कारण तपाईंको अमेरिका भ्रमण पनि संघीय सरकारले रोकेको भनिन्छ नि ?
के रोक्यो ? राम्रै भएको छ नि । कम से कम यहाँ काम गर्ने मौका भेटेको छु । बजेट बनाउने समय छ । बजेट बनाउने बेलामा राम्रै सोच्नुभयो होला । खटपट केही छैन ।
प्रदेशका अर्थमन्त्रीले त संघीय सरकारसँग जवाफ माग्ने भन्नुभएको छ नि ?
अब कसले के भन्छ, उहाँलाई नै सोध्नूस् । मेरो यसमा भनाइ के छ भने राम्रै गरिएको छ ।
केन्द्रमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको र संघीय समाजवादी फोरमसमेत सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा तपाईको पद पनि धरापमा परेको छ भनिन्छ नि ?
त्यस्तो होइन । यो वाहियात कुरा हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । मलाई कसले हटाउने ? जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार हामी यहाँ आएका हौं । केन्द्रको समिकरणले प्रदेशको गठबन्धनमा केही असर पर्दैन । हामीलाई जनताले जानादेश दिएका छन्, हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।